आज मिति २०७८ साल जेष्ठ २२ गते शनिबारको राशिफल हेर्नु’होस्
Homeराशिफलआज मिति २०७८ साल जेष्ठ २२ गते शनिबारको राशिफल हेर्नु’होस्
June 5, 2021 admin राशिफल 2308
सकरात्म’क सोचको कारण सामुहिक दाहित्व हात लाग्नेछ । जिबन साथिको सहयोगले अचल सम्पति प्रा’प्तिको योग रहेको छ । मित्र सगँको अति सामिप्यता कष्टकर रहला । मनोरञ्जनको क्षेत्रमा समय र धन खर्चनु पर्नेछ । स्वास्थ सम्बन्धी सामान्य समस्या’ले मनमा तनाब उत्पन्न गराउन सक्ला ।
अप्रत्यासित मि_त्रजन सगँको भेटले मन प्रफुल्लीत रहनेछ । नयाँ कार्यको थालनिलाई नयाँ योजनाको आव’श्यक पन्र्न सक्ला । पारीवारिक साथ सहयोगले आम्दानि बृद्धि हुनेछ । अरुको कुरा सुन्ने बानिले झन्झट आईपर्ला । यात्रामा सामान्य चोटपटकको सम्भा’बना रहेकोछ । मान्यज’नको सहयोगमा गरीएका कार्यले दीगो फाईदा दिलाउनेछ ।
आर्थीक समस्या’बाट बच्न सकरात्मक सोचको आबश्यक पर्न सक्ला । परीस्थीतिसगँ जुध्ने क्षमतामा बृद्धि हुनाले कार्य सफल रहनेछ । परिवारको सहयोगले बौधिक तथा आर्थीक बिका’सको बाटो फेला पर्ने छ । शारीरिक आलस्यातले गर्दा गरीरहेको कामको क्षेत्रमा अपजस सहनु पर्ला । खान’पानमा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ ।
अगाडि सारेका व्यक्ती’द्वारा सम्पादित कार्यहरु बिफल हुनाले अपजस खेप्नुपर्ला । मित्रजनसँगको अधिक निक’टताको कारण भाग्योदयमा बाधा तथा अना’वश्यक खर्च उत्पन्न हुनेछ । परीवारमा बिताएको समय फाईदा जनक रहला । प्रतिपक्क्षी सबल रहनाले तपाईलाई आफ्नु कम’जोरीको महसुस हुनेछ ।
मान्यजनको स्वास्थ’मा देखिएको खराबिले मानसिक तनाब उत्पन्न गराउला । मित्रजनको यथेष्ट सहयोग द्वारा आम्दा’निका नँया स्रोत फेला पर्नेछन । लापरबाहिले धन’मालको क्षति ब्यर्होनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ । स्वास्थ सम्बन्धि सम’स्याले सताउन सक्छ बिशेष ध्यान दिनु होला । अरुको कुरामा बिशेष ध्यान नदिनु होला ।
हतासमा गरिएको निर्ण’यको कारण दाम्पत्य जिवनमा खटपट उत्पन्न हुन सक्नेछ । प्राकृतीक स्रोत साधनको परि’चालनबाट यथेष्ट लाभ उठाउन कुटुम्बको सहयोग आवश्य’क रहनेछ । बिद्या तथा सन्तान शुख प्राप्ति हुने योग रहेकोछ । आय आर्जनमा बृद्यि गर्नका लागि तपाईले बढी परीश्रम गर्नु पर्न सक्छ ।
तपाईको परोप’कारी भाबनाको फाईदा अरुले उठाउनाले तपाई कमजोर रहनु हुनेछ । अगाडि सारेका व्यक्ती’द्वारा सम्पादित कार्यहरु बिफल हुनेछन । अर्काको खुसिको लागी अना’वश्यक समय र धन ब्यय गर्नु पर्नेछ । आफ्नो चार्तु&यताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ ।
स्थान परी’बर्तनले मानसिक तबरमा समस्या आईपर्न सक्ला । आफु भन्दा सानाको सहयोगले गरीएका कार्य’हरु फाईदा जनक रहनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले मनमा उमंग छाउनेछ । सन्तानको स्वास्थमा आएको असरमा बृद्धि हुनेछ । शारीरिक आलस्य’ताका कारण कार्यक्षेत्रमा अपजसको सम्भाबना रहनेछ ।
मनोरञ्ज’नको क्षेत्रमा समय ब्यतित गर्नु पर्ने दिन रहेको छ । सामान्य कार्यको निम्ति ज्यादा परीश्रम र सम’य खर्च हुनेछ । आफ्नो कला कौशलता को प्रयोगले अरुको मन जित्न सफल रहिनेछ । हतासमा निर्णय नगरैकै बेश हुनेछ । मान्यज’नहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
सामान्य परिस्थ’ति बिकराल बन्नाले प्रिय ब्यक्ति हरु सगँ को सम्बन्ध टाढिएला । जिबन साथिको ख’राब स्वास्थले कार्यक्षेत्र प्रभाबित रहन सक्नेछ । नेत्रृत्व गर्ने क्षमतामा बृद्धि तथा नेत्रृत्व गर्ने समय प्राप्त हुनेछ । मानसिक चन्चलताका कारण गरी’रहेका कार्यमा सामान्य ढिलाईको सम्भाबना रहेकोछ ।
मान्यज’नको पुर्ण सहयोगले कार्य सहज बन्ने छ । अपरीपक्क कार्यले सामान्य खर्च बढाउन सक्नेछ । खानपा’नमा बिषेश ध्यान दिनु होला । परीस्थीति सगँ जुध्न’सक्ने क्षमताको खाचो महसुस हुनेछ । प्रतिपक्षीहरु सवल रहनाले कार्य सम्पाद’नमा झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला ।
कार्यको बेवास्ताले मान्यज’नलाई ठेश पुग्नेछ । पारीवारिक सरसल्लाहाबाट अगाढि बढाइएको काममा सफ’लता प्राप्त हुनेछ । हतारमा गरिएको निर्णयले पछि पछु’ताउनु पर्ने हुनाले सचेत रहि अघि बढ्नु होला । बौधिक ब्यत्तित्व हरुको साथ सहयोगमा आर्थिक क्षेत्र सवल बन्ने सम्भाबना रहेकोछ । नयाँ लगानिमा उत्तम समय रहे’कोछ ।
केपी ओलीको मन्त्रिपरिषदमा, रघुवीर महासेठ दम्पती पालैपालो मन्त्री भए !
सेनाको तालिम गरिरहेका जवान, १९ वर्षीय अर्जुनको मृ’त्यु
असार ९ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
June 23, 2021 admin राशिफल 2805
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) अरुको कुरामा बिशेष ध्यान नदिनु होला । मनमा कुबिचारले बास गर्नाले भोलिको समयमा केहि झन्झज पर्न सक्छ । खर्चको योग रहेको हुनाले लगानिमा ध्यान
March 14, 2021 admin राशिफल 2874
आज मिति २०७८ साल ११ गते मंगलबारको राशिफल हेर्नु’होस्
May 25, 2021 admin राशिफल 3441
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) जीवन साथिको साथ सहयोग द्वारा ब्या’पार ब्यवसायका क्षेत्रमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । नयाँ कार्य थालनिको सम्भाबना रहेकोछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सामान्य मान
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (220378)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (220139)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (215051)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (213758)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (213701)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (182159)